मौसमी फ्लुका कारण हुम्लामा पनि ६ जनाको मृत्यु - Nepal News - Latest News from Nepal
कालिकोट, बैशाख १० – हुम्लामा पनि मौसमी फ्लुका कारण हुम्लामा ६ जनाको ज्यान गएको छ । हुम्लामा चैत पहिलो सातादेखि फैलिएको मौसमी फ्लुका कारण कालिका र डाँडाफया गाबिसमा १/१ जना, श्रीनगर र छिप्रामा २/२ जना गरी ६ जनाको मृत्यु भएको हो ।
६ जनाको मृत्यु भएपछि स्वायन फ्लुको आशंका गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बिरामीको नमुना काठमाडौ पठाउने तयारी गरेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सर्तकता अपनाउन जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गरेको छ । दिन प्रतिदिन गाउँमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको सदरमुकाम सिमकोटदेखि ७ कोष टाढाको छिप्रामा सिनियर अहेव हरिभक्त शाही नेतृत्वको टोली खटाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमूख डा. अनिलकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । ‘हामीले मौसमी फ्लु प्रभावित क्षेत्रमा सवास्थ्यकर्मीको टोली पठाएका छौं ।’ उनले भने,– ‘टोलीले एकै गाउँमा १७ जना साना वालवालिका र अन्य बिरामीको संख्या रहेकाले बताएपछि छिप्रालाई संकाष्पद क्षेत्रका रुपमा आफुले राखेको छौं ।’
डा. गुप्ताका अनुसार बिरामीको रगत इडिटियुव ट्युवमा राखेर परिक्षणका लागि टेकु अस्पताल पठाउने डा. गुप्ताले बताए ।
मौसमी रुघाखोकीका कारण बिरामी परेको छिप्रा गाविस लेखगाउँका गोपाल जेठाराको जिल्ला अस्पतालमा ल्याएकै दिन मृत्यु भएपछि झस्कीएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले जिल्लाका सबै स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीको भेला बोलाएर सर्तक रहन आग्रह गरेको छ ।
शुरुमा नाक, कान घाँटी दुख्ने, ज्वरो आएर शुरु हुने बिरामीले पछि शरिर गल्दै गएर वालवालिका र वृद्धवृद्धाको ज्यान गएका खबर आएपछि आफूले उच्च सर्तकता अपनाएको डा. गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा स्वाइन फ्लुु नभएको दावी गरेका प्रमूख गुप्ताले छिप्राबाट आएका बिरामीको लक्षण अलि गम्भीर प्रकारको रहेको डा.गुप्ताले बताए ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधी नभएका कारण समेत केही कठिनाई भएको कालिका ४ का दिपबहादुर रोकायाले बताए । रोगले जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रका ५ वटा गाविस सहित दार्मा, साँया, छिप्रा, डाँडाफया, स्याँडा, मुचु लगायत दर्जन भन्दा बढी गाविसलाई प्रभावित पारेको छ ।
जिल्लाको उत्तर तर्फका गाविसमा समेत बिरामीको संख्या बढेको खबर आएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीको टोली उत्तरी क्षेत्रमा पठाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सुपरभाईजर समेत रहेका सूचना अधिकारी नरेशवावु श्रेष्ठले बताए ।